Momba anay - Xiamen Pro Imp. & Exp. Co., Ltd.
PRO.FENS dia niforona tamin'ny 2014, Birao foibe ao XIAMEN ary orinasa any AnPing Industrial Park, faritanin'i Hebei, fantatra amin'ny anarana hoe Hometown of China Wire Meshes. Tany am-piandohana dia manamboatra sy mamatsy fefy vy tariby vita amin'ny vy amin'ny orinasa angovo japoney izahay. Saingy amin'izao fotoana izao, ny vokatra sy serivisy kalitao ananantsika dia nahazo laza malaza ary nitatra ihany koa ny asa aman-draharaha tany Korea Atsimo, Malezia, Singapore, Kanada, Brezila, UAE, firenena any Eropa. Nanjary mpanamboatra matihanina ny vokatra vy izahay, nanolotra fefy voaroaka avo lenta, Fefy rohy rojo, fefy an-tsaha, paosin-tady, Wire Mesh Partitions, Wire Mesh Lockers, Cage Trolley sy maro hafa. Afaka nanaiky ny OEM hamaly ny filanao izahay.
Fa maninona PRO.FENS
Ny fampanantenanay dia ny hanome vokatra avo lenta. Ny entana rehetra dia novokarina fatratra araka ny fenitra momba ny fenitra momba ny Organisation Assurance Quality (JQA). Manaiky ny fanaraha-maso ny sahan'ny antoko fahatelo avy aminao koa izahay na manome ny mari-pankasitrahana araka ny Birao Foibe Iraisam-pirenena Kanadiana (CGSB), ny American Society for Testing and Materials (ASTM) sns.
Ny fitantanana anay dia efa niaina tamin'ny famolavolana sy fifanakalozana vokatra vy nandritry ny 10 taona ary nanome vahaolana matihanina ho an'ny mpanjifa manarona an'i Japon, Korea Atsimo, Malaysia, Dubai, UAE, French, Dubai, Canada, USA sns. Indrindra indrindra fa mitazona fiaraha-miasa tsara izahay miaraka amin'ny ankamaroan'ny orinasa Japon ary fefy maherin'ny 3.000.000m no naondrana tany Japon avy tao amin'ny orinasanay. Izahay dia za-draharaha hamaha olana isan-karazany dia mety hitranga rehefa misafidy sy mametraka fefy.
Izahay dia mifehy ny rohy famokarana iray manontolo avy amin'ny fividianana fitaovana-welding-bending-coating-fonosana mandra-pahatongan'ny mpanjifa. Izahay poketra dia manome ny vidiny ambany indrindra amin'ny kalitao mitovy.
Miara-miasa amin'ny fandrosoana iraisam-pirenena izahay mba hahazoana antoka fa afaka manatitra ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby ny entanay.
Hatramin'ny niorenan'ny orinasanay ny taona 2014, nanatrika fampirantiana mihoatra ny 30 izahay any amin'ny faritr'i Japon, Kanada, Dubai ary ireo firenena Azia atsimo atsinanana. Mampiseho ny vokatray sy ny endrika vaovao izahay mandritra ny fampiratiana. Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia mankasitraka ny serivisinay ary manome fahafaham-po ny vokatray amin'ny fampirantiana ary mitazona ny fiaraha-miasa aminay. Ankehitriny dia nitombo 120 ny mpanjifanay mahazatra.